Mucaaratka oo War Kasoo Saaray Shirkii Madaxda Maamul Gobaleedyada ee Dhuusamareeb – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa soo dhaweeyay Warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii dhawaan u socday madaxda maamul Gobaleedyada, Qoraal uu soo saaray C/raxmaan C/Shakuur ayaa waxaa uu kusoo dhaweeyay War- murtiyeedka Shirkaas, wuxuuna sheegay inay haatan ay muuqato in Dowladda Federaalka, M/Goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda isku raacsanyihiin in la qabto doorasho aan xilligeeda ku dhacda.
Waxaan soo dhoweynayaa war murtiyeedka ka soo baxay shirka Dhuusmareeb ee Dowlad Goboleedyada. Waxaa muuqata in xukuumadda, Dowlad Goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda isku raacsanyihiin in la qabto doorasho aan xilligeeda dhaafin, farsamada hannaanka (model) kana laga heshiiyo. Tani waxay soo afjaraysaa mugdigii iyo jahwareerkii lagu gadaamay xilliga kala guurka siyaasadeed ee dalka. Waxaan ugu baaqayaa Madaxweynaha in uu fursaddan ka faa’iidaysto, dadaal toganna horseed uga noqdo ka mira dhalinta wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb.
Waxaan markale u mahadcelinayaa hoggaanka iyo shacabka Galmudug sida midnimada iyo wadajirka leh ee ay kaga mira dhaliyeen shirka Dhuusmareeb wejigiisa koowaad. Inta damaca ka leh siyaasada waa in ay fahmaan in Dalkii dhinac isku raacay, lana garaay xilligii ololaha iyo abaal ergeshada.